Steve Ọrụ: The Infographic | Martech Zone
Amaara m na nke a enweghị ihe jikọrọ ya na ịzụ ahịa, mana m bụ ihe Apple fanboy nke mere na m ga-ebipụta Steve Jobs Infographic a. Edeela m ihe ndetu na echiche m banyere Ọnwụ Steve Jobs, na anyị mere a Zoomerang nnyocha e mere gosiri folks bụ nwee nchekwube banyere ọdịnihu Apple.
Ihe omuma a site na Infographic ụwa na-enye nkọwa zuru ezu banyere Steve Jobs na Apple. Emere ya nke ọma!
Wired magazine nwekwara wepụtara ihe eBook na anthology nke Steve Jobs nke ahụ dị na iPad, Ọdịdị, na Agba Nook.